#Kheyre Waa Raysal Wasare laba Sano Shaqeynayey ee aan Baarlamaanka hor-imaan Mudada uu joogo - Get Latest News From Horn of Africa
Xukuumada Khayre ayaa haysata aqlabiyada Golaha Shacabka, maadaama ay 72% ay ka yihiin wasiiro Laanta Fulinta kamida, taasi oo xeel-dheerayaashu aaminsan yihiin in ay tahay sababta Golaha Wasiirada u sii joogi karaan.
Dadka taageersan xukuumada haatan jirta ayaa aaminsan in xubnaha mucaaradka ah ee baarlamanka ku jira ay yihiin kuwa xil doon, balse aysan daacad ka hayn mucaaradnimadooda.
Hasayeeshee, Dr Cabdifitaax ayaa gaashaanka ku dhuftay sheegashadaasi, isaga oo yiri “Ma lihin inaga ha nagula bedello … waxaa la heli karaa shaqsiyaad ka wanaagsan kuwa haatan jirta.
Eryadda culus ee kasoo yeeray Cabdifitaax ayaa imaanaya iyada oo Isniintii magaalada Nairobi ay ku kulmeen Xildhibaano iyo siyaasiyiin kuwaasi oo kuu tartarsiiyay madaxwayne Farmaajo in uu oo dhiso Gole Fulin oo cusub.
Hoos ka dhageyso codka Xildhibaan C/Fataax